VaIsrael danho remafaro emahombekombe kuratidzira vachirwisa new COVID-19 kukiya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Israel Breaking News » VaIsrael danho remafaro emahombekombe kuratidzira vachirwisa new COVID-19 kukiya
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Israel Breaking News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vazhinji varatidziri, vazhinji vacho vakapfeka masutu ekugezesa uye vakabata zvikwangwani zvinopesana nehurumende, vakaungana kuFrishman Beach muTel Aviv kuratidza kusafara kwavo neyechipiri nyika yeIsrael. Covid-19 kusabvumirwa kufamba.
Iseaelis akaramba mirairo yekuzvitsaura ndokuenda kunzvimbo yegungwa nemugovera. Kuratidzira uku kunouya zuva rapfuura mushure mekunge Mutungamiriri wenyika, VaBenjamin Netanyahu, vamanikidza kusungwa kwemavhiki matatu munyika yese, zvichinzi vaida kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Mahombekombe ese achavharwa sechikamu chemasvondo-akareba kugara wega.
Rally yakakura yekurwisa-kukiya yakaitika neChina manheru mudhorobha reTel Aviv, asi kuratidzira uku hakuna kuita imwecheteyo yemahombekombe emuchadenga. Vhidhiyo kubva pakuratidzira kweMugovera inoratidza boka revaIsrael vachipwanya mumvura ivo vachitamba kumimhanzi uye vachisimudza mireza.
Mumwe muratidziri akasvika aine shofar, runyanga rwechitendero chechiJuda, sezviri pachena kuratidzira danho rehurumende rekupa 'mvumo yekufamba' kune vanopfura panguva yegore revaJudha, Rosh Hashanah.
Kuratidzira uku kunoita kunge kwaive nemamiriro emafaro - zvirinani, kudzamara mapurisa asvika.
Mapurisa akazosvika panzvimbo iyi ndokuzivisa vanhu vazhinji kuti havana kubvumidzwa kuratidzira pamhenderekedzo yegungwa. Hazvina kujeka kana paine kusungwa kwakaitwa. Sechikamu chekuvharira nyowani, kwakatanga neChishanu, Israel yakaunza 'sumbu remakumi maviri' mutemo, uyo unoda kuti varatidziri vazvipatsanure pachavo mumapoka asina vanhu vanopfuura makumi maviri, ne 'sumbu' rega rega richipararira munharaunda.
Israel yataura 179,000 dzezviitiko uye vanopfuura 1,160 vakafa, nevatungamiriri vachiti huwandu hwekufa hunogona kukwira, sezvo hutachiona hutsva hwemazuva ese hwakapfuura zviuru zvishanu. Zviremera zvinoti vakasimudza kukiya kwekutanga nekukurumidza, asi danho rekumisazve zvirambidzo rakatsamwisa vazhinji veIsrael vachiri kutetereka kubva kumagariro nehupfumi miganho yekutanga. Vatsoropodzi vaNetanyahu vakapomera mutungamiriri wehurumende akashongedzerwa nekushandisa denda iri kutsausa kutsvedza kwake kwezvematongerwo enyika nekutongwa kwehuori.
Yakanyanya njodzi: Hong Kong inorambidza vese vanofamba ...
England kusimudza zvese COVID-19 zvirambidzo muna Chikunguru 19 ...
Kubvunzana kuri kuenderera kugadzirisa zvimisikidzo muJamaica ...
Hilton 1, Hyatt 2, Marriott chete mashanu mukupona COVID ...